အကြမ်းဖက်သမားများ ရန်မှ လွတ်ကင်းရေး – JIS.DIGITAL
“ အလောင်းအမှတ် . . . သုံည
တယောက် ပြာကျသွားပြန်ပြီ ”
ကဗျာဆရာ ဖော်ဝေးရေးသည့် “ မီးလောင်ပြင် ” အမည်ရှိ ကဗျာတစ်ပုဒ်၏ အစ ပထမအပိုဒ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း လူကြီးလူငယ်၊ လူရွယ်လူလတ်၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူနှင့် အညတြ စသော သူရဲကောင်းများ ကျဆုံးသွားခဲ့ရသည်က ကိန်းဂဏာန်းတွေ မရေတွက်နိုင်တော့ပြီ။ Covid – 19 ကပ်ဆိုးကြောင့် နှစ်၊ လချီကာ ထွက်ပေါက်မရှိဘဲ မွန်းကြပ်စွာရုန်းကန်ဖြတ် သန်းနေကြရသည့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် အာဏာမက်သော စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်သိုက် စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှောင်မိုက်နေ့၊ မှောင်မိုက်ညပေါင်း ရက် ၂၀၀ကျော်ခဲ့ပြီ။ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အပေါင်းအပါများ၊ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား များ လက်အတွင်း ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရခြင်းထက် အသက်သေဆုံးခြင်းကပင် သာ၍မြတ်ပြီး ပို၍ လွတ်လပ် ကြောင်းကို ဩဂုတ်လ ၁၀ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၄၄လမ်း အဖြစ်အပျက်က သက်သေပြနေပါသည်။
ယခုတစ်ပတ် Myanmar Peace Monitor ၏ အပတ်စဉ်သုံးသပ်ချက်ကဏ္ဍတွင် အဆိုပါအဖြစ်အပျက်နှင့် ပြည်သူ လူထု၏ မွန်းကြပ်နေမှုများကို တို့ထိသွားပါမည်။
ဩဂုတ်လ ၁၀ရက်၊ ညနေ သုံးနာရီ ဝန်းကျင်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၄လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်ခုတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အရပ်ဝတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ အမြင့်ပေ ၅၀ကျော်ရှိသည့် ၄ ထပ် တိုက်ပေါ်မှ လူငယ် ၅ဦးခုန်ချသွားခဲ့ပြီး ၂ဦး ကျဆုံးကာ ၃ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၃ဦး ဖမ်းဆီးရမိ ကြောင်း အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။
အာဏာစစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိသူ ကိုဝေဖြိုးအောင်၊ ကိုသီဟကောင်းဆက်နှင့် မပိုးကျော်ကျော်ခန့်တို့ ၏ ထွက်ဆိုချက်များဟုဆိုကာ တပ်မတော်ပိုင်မြဝတီရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သော်လည်း ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သော လူငယ်သုံးဦးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သေသလား၊ ရှင်သလားဆိုသည်ကို ယခုထိ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသည် ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါနေအိမ်တွင် ရှိနေခဲ့သည့် ကိုကောင်းမင်းခန့် ခေါ် Flex နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံးသကဲ့သို့ ကောလဟာလများသာ ပြန့်နှံ့နေခဲ့ သည်။ ထို့ပြင် အခင်းဖြစ်သည့် ညနေပိုင်းတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်း စကား ပြောစက်မှ တဆင့် သတင်း ပေးပို့ချက်များသည်လည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင် ပြန့်နှံလာခဲ့ပါသည်။
ဩဂုတ်လ ၁၇ရက်တွင်တော့ အသက်သေဆုံးသွားပြီဟု သတင်းထွက်ခဲ့သည့် ကိုကောင်းမင်းခန့်သည် အသက် မသေဘဲ လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်ခုမှတဆင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကို DVB ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ အ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုကောင်းမင်းခန့်က “ဘာတစ်ခုမှ အမှန်မရှိဘူး . . . ၄၄လမ်းကို ဝင်ဖမ်းတယ်၊ ခုန်ချတယ်ဆိုတာပဲ မှန်တယ်၊ သူတို့တွေ သေနတ်ပစ်ဖောက်တာ၊ သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုတာတွေ အကုန်လုံးကို ဖုံးထားတယ်”ဟု ရှင်းပြပါသည်။
ကိုကောင်းမင်းခန့်သည် ပထမဆုံးခုန်ချသွားသူကိုသာ မမြင်လိုက်ရသော်လည်း မဝေဝေမြင့် အပါအဝင် လူငယ် ၄ဦး ခုန်ချသွားသည်ကို မြင်ရကြောင်းနှင့် ပက်လပ်ပုံစံဖြင့် အထပ်လိုက်အနေအထားဖြစ်ကြောင်း ၎င်းမြင်တွေ့ ခဲ့သည်ကို DVBအား ပြန်ပြောပြပါသည်။ အသက်ငွေ့ငွေကျန်နေသူများကို အရပ်ဝတ် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်သားများက သေနတ်ဒင်ဖြင့် ထုနှပ်နေသည်ကို တွေ့ရပြီး နှစ်ဦးကတော့ ချက်ချင်းသေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်နိုင် ကြောင်း ကိုကောင်းမင်းခန့်က ပြောပါသည်။
သို့သော် နောက်ဆက်တွဲသတင်းများအရ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ သဂြိုလ်သည့် ရေဝေသုသ္သုန် အတန်းတစ် ခုတွင် အလောင်း ၄လောင်းကို မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အတွက် လက်ရှိတွင် ‌လေးဦးကျဆုံးပြီး ကိုမင်းသစ္စာအောင်ဆိုသူ လူငယ်လေးကတော့ ကုတင်တစ်ထောင်စစ်ဆေးရုံတွင် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာြဖင့် ကုသမှုခံယူနေသည်ဟု ကြားသိရကြောင်း ကိုကောင်းမင်းခန့်က ပြောပါသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူ သုံးဦးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြဝတီရုပ်သံမှ ထုတ် လွှင့်ချက်များသည်လည်း ဇာတ်လမ်းစဉ်က ပြောဆိုခိုင်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်ရှုမြင်ပါသည်။
“အရှင်အမိ မခံဘူး၊ လွတ်အောင်ပြေးမယ်၊ မလွတ်ဘူးဆိုရင် အသေခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ အရှင်အမိ မခံနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က ရှိပြီသား”
၄၄ လမ်းအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် ဇွန်လ ၂၂ရက် တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၄လမ်း အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု၊ ၅၆လမ်းနှင့် ၁၁၀လမ်း ထောင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်များကို သတိရစေပြီး လုပ်ကြံသတင်းများ၊ မမှန်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုများကို ပေါ်လွှင်စေပါသည်။
ပြည်သူလူထုအား အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အသက်သေဆုံးသည်အထိ အကြပ်ကိုင်စစ်မေးခြင်း၊ လွတ်လပ် ခွင့်ဟူသမျှ ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်း စသည့်အပြင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ရန်ပင် ဝန်မလေးတော့သည့် အာ ဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အစေအပါးများ၊ လက်အောက်ခံအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ် သားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့လုယူထားသည့် တိုင်းပြည်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် တိုင်းသူပြည်သားတစ်ဦးချင်းစီ ၏ အသက်တိုင်း၊ ဘဝတိုင်းကို နုတ်ယူသွားမည်ဟု ခံယူထားသလား မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါသည်။
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ ၆လတာ စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရသည့် မွန်းကြပ်မှု၊ လွတ်လပ်ခွင့် ငတ်မွတ်မှု၊ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ချမှုစသည်တို့သည် နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော်ကြာ စစ်ခေါင်းဆောင်များကြီးစိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့သော အတိတ်ကာလများထက်ပင် ပို၍ မွန်းကြပ်နေခဲ့ပြီဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။
ဩဂုတ် ၁၇ရက်အထိ AAPPမှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းအရပင် သေဆုံးသူ ၉၉၉ဦး၊ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၇၃၂၀ဦး၊ ဖမ်းဆီးစစ်မေးစဉ် သေဆုံးသူ ၃၀ကျော် ရှိနေပြီး AAPP ၏ စာရင်းမဝင်ဘဲ ကျဆုံးခဲ့သည့် နွေဦးတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းများ များစွာရှိနေနိုင်ပါ သည်။ အလားတူ စစ်အာဏာမသိမ်းခင်က စနစ်တကျရှိနေသည့် Covid – 19 ကြောင့် အသက်ပေးခဲ့ရသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများလည်း ထောင်နှင့်ချီသည်အထိပင် များပြားနေသည်ကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ၄၄လမ်း အဖြစ်အပျက်မှ ထူးခြားတုန်လှုပ်ဖွယ်တွေ့ရှိချက်ကတော့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဖမ်းဆီး ခြင်းခံရပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ဖော်ကောင်ဖြစ်ရသည်ထက် အသက်အသေခံလိုက်မည်ဆိုသည့် အချက် ဖြစ်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပင် အံဩမင်သက်ရသည်အထိ အမြင့်ပေ ၅၀ကျော်ရှိ လေး ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချပြခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်အစေအပါးများလက်မှ လွတ်မြောက်ရာကို ရှာဖွေသွားခဲ့သည်။
အိမ်ခေါင်မိုးထက်တွင် ခိုကပ်နေရင်း လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသူ ကိုကောင်းမင်းသန့်က “အရှင်အမိ မခံ ဘူး၊ လွတ်အောင်ပြေးမယ်၊ မလွတ်ဘူးဆိုရင် အသေခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ အရှင်အမိ မခံနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် က ရှိပြီသား”ဟု ဆိုပါသည်။
မွန်းကြပ်လွန်းသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်မှ လွတ်လပ်ခွင့် ရေးရေးလေး မြင်ရသည်ကိုပင် ကျေနပ်စွာ ခုန်ဆင်းပြမည့် ၄၄ လမ်းအဖြစ်အပျက်မှ လူငယ်လူရွယ်များ မည်မျှရှိနေပါသနည်း။
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် ၎င်းအဓမ္မလုယူထားသည့် တိုင်းပြည်အာဏာ အရပ်ရပ်ကို လည်ပတ်နိုင်ရေး၊ အခြေတည်နိုင်ရေး ရုန်းကန်နေရသကဲ့သို့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ်အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက် ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြရသည့် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ ပုံစံအမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှုများသည်လည်း ကာလအတန် ကြာလာသည့်အလျောက် အရှိန်အဟုန်ကျမသွားရေး ရုန်းကန်နေကြ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်များ၏ အုပ်စိုးမှုကြောင့် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအတွက် အဖက်ဖက်မှ ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့ရသည့် အခြေအနေများကို စစ်အာဏာရှင်များပေးသည့် အမည်ခံဒီမိုကရေစီခေတ် ၁၀နှစ် တာကာလတစ်ခုသည် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်အတူ အိပ်မက်တစ်ခုသဖွယ် ပျက်သုဉ်း သွားခဲ့ရသည်။
၆လတာ စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း စီးပွားရေး မပြေလည်မှုများ၊ လူမှုရေး ကြပ်တည်းမှုများနှင့် လုံချာလိုက် နေသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဟု သတိချပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သွားရေး၊ လာရေး၊ နေရေး၊ ထိုင်ရေးကအစ မလုံခြုံမှုများ၊ ကန့်သတ်မှုများအကြား ထွက်ပေါက်ရှာမတွေ့တော့ သည့်အဖြစ်အပျက်များ၊ ကြပ်တည်းသည့် ဘဝများကို မြင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။
မွန်းကြပ်လွန်းသည့် အခြေအနေ တစ်ရပ်မှ လွတ်လပ်ခွင့် ရေးရေးလေး မြင်ရသည်ကိုပင် ကျေ နပ်စွာ ခုန်ဆင်းပြမည့် ၄၄ လမ်း အဖြစ်အပျက်မှ လူငယ်လူရွယ်များ မည်မျှရှိနေပါသနည်း။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်း ရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဟစ်ကြွေးနေကြသည့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ဝိုင်းအပါအဝင် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ အစုအဖွဲ့အသီးသီးအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ မွန်းကြပ်နေ သည့် အခြေအနေတစ် ရပ်ကို ထွက်ပေါက်ရှာပေးဖို့ မည်မျှအချိန်ယူဖို့ လိုအပ်နေပါသနည်း။ အာဏာသိမ်းစစ် ခေါင်း ဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အစေအပါးများအနေဖြင့်လည်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ၏ လွတ် လပ်ခွင့်အတွက် မည်သည့်အချိန်ထိ ပိတ်လှောင်ထားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသနည်း။
အထက်ပါမေးခွန်းများကို ရေရွတ်လျက် “မီးလောင်ပြင်” ကဗျာမှ နောက်ဆုံးစာပုဒ်လေးဖြင့် အဆုံးသတ်ချင် ပါသည်။
“ ဘယ်သူလဲ . . . ဘယ်သူတွေလဲ ဟင် . . .
အသက်ရှင်နေသေးသူများ . . . သွားစို့ ” ။
Tags: Freedom From Terrorist Myanmar Peace Monitor What Happened Myanmar ဖော်ဝေး မီးလောင်ပြင် အကြမ်းဖက်သမားများ ရန်မှ လွတ်ကင်းရေး
Previous: အိမ်စောင့် ပုံပြင်
Next: ကနီဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု